DHAGEYSO: Booliska Soomaaliya oo faahfaahiyay Khasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay Muqdisho - Radio Risaala: Somali News Online
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa oo Saakay lala beegsaday Waaxda ilaalada Canshuuraha Biriga oo ku taalla kasoo horjeedda Dekedda Muqdisho gaar ahaan Dhabarka dambe ee Xarunta degmada Xamarjajab.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in Qaraxaasi ay ku dhaawacmeen Shan ruux oo ka mid ahaa Ciidanka Booliska Soomaaliyeed gaar ahaan Ciidanka ilaalinayay xarunta.
Waxaa uu sheegay in Ciidanka Booliska rasaas ku fureen ka hor inta uusan soo gaarin xarunta Ilaaladda Canshuuraha, islamarkaana uu ku geeriyooday kaliyah qofkii waday gaariga Qarxay.
Nooca gaariga Qarxay ayuu ku sheegay in uu ahaa Sruf Madow ah.
Xarunta ilaalada Canshuuraha biriga ayaa ka mid ah meelaha sidda weyn loo adkeeyo ammaankooda, waxaana ay ku taalla Dekedda Muqdisho oo ka mid ah Ilaha ugu muhiimsan dhaqaallaha dalka.
Previous articleKhasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay Qarax ka dhacay Baydhabo
Next articleMadaxweyne Deni oo daah-furay Imtixaanaadka Shihaadiga Puntland